Nin ku faanay in uu gudaha u galay Twitterka Madaxweynne Trump oo Su’aalo la weediiyay | Allbanaadir.com
Home NEWS Nin ku faanay in uu gudaha u galay Twitterka Madaxweynne Trump...
Nin ku faanay in uu gudaha u galay Twitterka Madaxweynne Trump oo Su’aalo la weediiyay
Booliska Netherlands ayaa su’aalo weydiiyay cilmi-baare ammaanka internet-ka ah oo sheegay inuu ku guulaystay gelidda cinwaanka uu Twitter ku leeyahay Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, kadib markii uu ku nasiibsaday lambarka sirta ah.
Balse Gevers ayaa sheegay inuu hayo xog dheeraad ah oo uu ku xaqiijinayo sheegashadiisa. Ma uusan shaacin waxa ay tahay xogtaas, balse qofka marka uu galo cinwaanka Twitter-ka qof kale waxa uu arki karaa xogo badan oo muhiim ah.
Waxa uu qofkaas la soo degi karaa dhammaan xogta milkiilaha cinwaankaas oo ay ku jiraan sawirrada iyo farriimaha.
Previous articleCiidamada Itoobiya oo magaalooyin cusub kala wareegay xoogaga Tigrey iyo dagaalka oo ..
Next articleWasiir katirsan dowlada Uganda oo Amar ku bixiyay arin amakaag ku abuuray shacabka !!
Xiisad ka aloosan Belad-Xaawo iyo Khilaaf soo kala galay Fahad Yaasin & Muudey
Agaasinka Waxbarashada G/Banaadir oo lugaha la galay Musuq & eedeymo heysto
Dhaqtar caan ah oo caawa lagu dilay Kismaayo & faahfaahino ka soo baxaya
Somalia on Sunday appeared to dig a new rift with Kenya after it summoned its envoy to Kenya “for consultations”, accusing Nairobi of interfering...
Sudan’s former PM Sadiq al-Mahdi dies from coronavirus in UAE – Reuters